မိုးရေထဲမှ သက်စွန့်ဆံဖျား ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းခွင် အလုပ်သမား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Jobs & Careers » မိုးရေထဲမှ သက်စွန့်ဆံဖျား ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းခွင် အလုပ်သမား
မိုးရေထဲမှ သက်စွန့်ဆံဖျား ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းခွင် အလုပ်သမား
Posted by etone on Jun 15, 2011 in Jobs & Careers, Photography | 29 comments
အလုပ်နဲ့ လစာ တန်အောင်ရရဲ့လား အသက်နဲ့ ငွေ ဘယ်ဟာ အဖိုးတန်နေပြီလဲ
ဆပ်ကပ်ထဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး … တကယ့် လုပ်ငန်းခွင်မှာ အထိန်းကွပ်မဲ့စွာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ … ။
အသက်နဲ့ ခန္ဓာတည်မြဲဖို့ ခြေနှစ်ဘက်ကို အားပြုပြီး လက်နှစ်ဘက်က အလုပ်လုပ်ရင်း ပြုတ်မကျအောင် ထိန်းနေရရှာတယ်… ။ မနေ့က မိုး အရမ်းသည်းနေတဲ့ အချိန် မျက်စိကစားလိုက်တုန်းတွေ့တာမို့ လျှပ်တပြတ်ရိုက်လိုက်တာပါ … ။ အဆောက်ဦးတခု ဖြစ်တည်မြဲဖို့ အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း မသေးဘူးဆိုတာ ပေါ်လွင်နေပါတယ် … ။ လူသုံးရပ်ကျော်လောက် အမြင့်ရှိပါတယ်..။ ခါးမှာ လည်း ဘာကြိုးမှ ချည်မထားပါဘူး … ။ ပြုတ်ကျလျှင် အနည်းဆုံး ခြေကျိုး၊ လက်ကျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ပါ ထိခိုက်နိုင်တာမို့ သက်စွန့်ဆံဖျား အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အဖြစ်ကို မှတ်တမ်းထင်ထားလိုက်ပါတယ်… ။
etone ကကိုယ်တိုင် ကွင်းဆင်းပြီး ဓာတ်ပုံပါရိုက်လာတာကိုး…
မြန်မာပြည်မှာကတော့ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေး ဆိုတာကရှားပါတယ် အခုလို အခြေခံလူတန်းစားတွေလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေမှာဆို ပိုဆိုးပေါ့ . ဒီအတိုင်း လုပ်ရင်တောင် အန္တရာယ်က၇ှိနိုင်တာ အခုလိုမိုး၇ွာကြီးထဲဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ …
ကမ္ဘာ့အလုပ်သမားတော်လှန်ရေး မဖြစ်ခင်လောက်က .. အလုပ်သမားအခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်..။
ဒီမှာက လက်ရှိ construction တွေမှာ ဒီလိုပဲ လုပ်နေကြတုန်းလေ သဂျီးရဲ့ … ။ သူတို့ခမျာ အင်ရှူးရန့်လည်း မထားနိုင်တော့ … မတော်တဆထိခိုက်မှုဖြစ်တဲ့ အခါ အလုပ်ရှင်က ဆေးခန်းပို့ … ဆေးရုံပို့တော့ လုပ်ပေးမယ် … ကုန်ကျစရိတ်လည်း ခံမယ်ပေါ့… လုပ်ငန်းခွင်ပြန်မ၀င်ပဲ အိမ်မှာ နားရတော့မဲ့ အချိန်ထိတော့ ဘယ်သူကမှ ပင်စင်လစာဆိုတာမျိုး ပေးမှာမဟုတ်ဘူး … မဖြစ်စလောက်နစ်နာကြေးနဲ့ပဲ နှစ်သိမ့်ကြမှာ .. ။
ဒီလိုလုပ်သားတွေဟာ လုပ်နေကျမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ ယုံတယ်။ မတော်တဆတွေ ဘာတွေလဲ သိပ်မတွေးဘူး။ အမှန်တော့ ဘ၀မှာ မတော်တဆတွေ အများဆုံးကလဲ ဒီလိုလူတွေပဲ။ လုံခြုံရေးသိုင်းကြိုး စတာတွေလဲ ရှုပ်လို့ဆိုပြီး မ၀တ်ချင်ဘူး။
အလုပ်သမားဥပဒေတွေအရတော့ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ် ကင်းဝေးအောင်စီမံဘို့ အလုပ်ခိုင်းတဲ့သူက တာဝန်ရှိပါတယ်။ ခက်တာက ဒီလိုဥပဒေတွေကလဲ လက်တွေ့အကောင် အထည်မဖေါ်တော့ ဘယ်လိုလုပ် အတင်း သိုင်းကြိုးဝတ်ခိုင်းလို့ ဦးထုပ်ဆောင်းခိုင်းလို့ ရပါ့မလဲ..။
ဒီတော့ လက်ငင်းအခြေအနေအရတော့ – သံဗုဒ္ဓေ လေး ရွတ် ပြီး ….။
အမယ်လေး … အသိတစ်ယောက်လေ air con ပြင်တာ လှေခါးပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ ခြေထောင်ကျိုးတာ ၁ လ တိတိကျောက်ပတ်တီးစီရတယ် … အလုပ်က ၂ သောင်းလား ၂ သောင်းခွဲလားပဲပေးတယ်တဲ့ … ကြည့်ဦး … ခိုင်းတုန်းကခိုင်းပြီးတော့ …
ဒီလိုမှမလုပ်ရင်လည်း တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားရတဲ့ နေ့စားသမားတွေအတွက်ကတော့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြမလဲ………..
တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတာချင်း တူပေမဲ့ … အလုပ်ရွေးချယ်တတ်တဲ့စိတ်ကွဲပြားတယ်လေ…။ တိုင်ပေါ်ကလူရော… အောက်ကလူတွေပါ တနေ့လုပ်မှ တနေ့စားရတာချင်း အတူတူပါပဲ … ။အဲ့ဒီ construction မှာတောင် တိုင်ပေါ်တက်တဲ့ လူ သူတယောက်ပဲ ရှိတယ်… ။ တက်တုန်းက ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တက်သွားတာ မြင်တယ်… ။ နောက်တိုင်ထိပ်မရောက်သေးတဲ့ တယောက်ကတော့ အသက်စွန့်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင်လို့ စမ်းတက်နေတယ်ထင်ပါ့… သူလည်း တိုင်ထိပ်နား ရောက်လုလုပဲ … လှုပ်ရှားမှူကတော့ နှေးကွေးနေတယ်… ။
ဘယ် ဟိုဟာက လက်သရမ်းပြီး dislike လုပ်နေတာလဲ … ရေးထားတဲ့အထဲဘာပါလို့ မင်းတို့က နာရတာလဲကွ ။ လူသားချင်းစာနာစိတ်ရှိတဲ့လူဆို လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး … ။ ခွေးသာသာ ဦးနှောက်ဥာဏ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ အခုလည်း dislike လုပ် ။
ကျနော်အမြင်တော့ ဒီလိုတွေ ဖြစ်နေတာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ အသိဥာဏ်နဲ့လဲ ဆိုင်မယ်ထင်တယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အထက်က ဒီလိုဒီလိုလုပ်ဆိုရင် ဆရာ ကျနော်တို့ ဒီလိုလုပ်ရင် အန္တရာယ် ရှိနိုင်တယ် ဆိုတာ မျိုး ပြန်တင်ပြတာ တွေနည်းတယ်ဗျ။
အထက်ကိုတင်ပြရမှာကြောက်လို့လားဒါမှမဟုတ် ပြောလဲ မထူးပါဘူး ဆိုပြီး လုပ်နေကြတာလားဆိုတာ တော့မသိ။
သူတို့ တတွေ သိပ်အန္တရယ်များပါတယ်။ စာနာမိပါတယ်။
အိမ်တော့မဟုတ်ဘူး စက်ရုံလား ဂိုဒေါင်လားဘဲ ….
ရိုက်ရကောင်းမှန်းသိတဲ့ တုံတုံကိုချီးကျူးပါသဗျား …။
Nice shoot, really touching.
အင်းဒီလောက်သက်စွန်.ဆံဖျားလုပ်တာတောင် လုပ်ခက နဲနဲပဲရကြရှာတာ…
တစ်ခုခုများဖြစ်လိုက်လို.ကတော့ ဘယ်သူကမှ အော် ဒီလောက်အလုပ်ကြိုးစားရှာတာ ရော့ ဆေးကုခလို.ပေးမယ်မထင်..
ဘာအာမခံချက်မှမရှိပဲ ဒီလောက်ကြိုးစားနေရင် အာမခံချက်များရှိလို.ကတော့ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံအလုပ်သမားတွေ အလုပ်ကို မနားတမ်းလိုက်လိုက်ကြမယ့်အမျိုးတော့ …….
ဒီလိုလူတွေ တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် သူ့မိသားစုဘ၀အတွက်လဲ မတွေးရဲစရာပဲ ………..
ဒီလူတွေ ဘာလို့ သက်စွန့်ဆံဖျား လုပ်ကြလဲ?..
မငြင်းနိုင်ဘူး..ရပ်တည်မှု အတွက် မငြင်းနိုင်ဘူးလေ။
လုပ်တဲ့လူချင်း အတူတူ ဘာလို့ စွန့်စားရလဲ ဆိုတော့
အလုပ်ထဲမှာ နေရာရဘို့ အတွက်ပေါ့
နိုင်ငံခြားသား ဆိုပိုတောင် လုပ်ပြရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။
ကိုယ်တိုင် ဒီနေရာမျိုးမှာ ရောက်မှ ဒီလို လုပ်ရ မယ် ဆိုတာ သိနိုင်မှာ၊
စွန့်စားတဲ့သူတွေ အတွက် နားလည်ခွင့်လွှတ် နိုင်ပါစေ။
လုပ်နေကြ လူလဲ အသည်းနဲ့ပါ ကြောက်တာပါဘဲ။
အလုပ်ထဲမှာနေရာရရေးက ကိုယ့်အသက်ထက်ပို အဖိုးတန်လို့လားလို့ပဲ မေးလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။
တချို့ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ရှင်က မြှောက်ပေးပြီး ခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်…. ။ တာဝန်သိတတ်မှူ ၊ ကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်တတ်မှူ ဆိုတာတွေကိုလည်း ကျင့်ဝတ်တခုလိုပဲ … ခေါင်းထဲ နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ရိုက်သွင်းပေးကြတယ်… ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အလုပ်သမားက ငါတယ်ဟုတ်ပါလားဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ပိုချီးမွမ်းခံရအောင်လုပ်ရောပဲ… အလုပ်ရှင်တွေ အရမ်းပါးနပ်ပြီး အလုပ်သမားကို ဘယ်လို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ နားလည်ပြီးသားပါ… ။ ကိုယ်တိုင်လည်း မြှောက်ပြီး ခိုင်းခံခဲ့ရတာ တခြားလူနေရာကနေ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်မိတော့မှ … လက်ရှိအခြေနေကို အမှန်တိုင်း မြင်နိုင်ခဲ့တာပဲ ။
နောက်တခါဆိုရင် construction နာမည်၊ လိပ်စာထည့်ပေးဗျ၊ ဒါမှ အိပ်ပျော်နေသူတွေ နဲနဲမြင်လာမှာ….
construction နေရာကတော့ ပြောလို့ မဖြစ်ပါဘူး … ။ ကိုယ့် ပရိုက်ဗိတ်ဆီ အတွက်ပါ ။
Safety First ဆိုတာ စာထဲမှာပဲ ရှိနေပါလား …
ကျွန်မလဲတစ်ခါတစ်ရံ construction site ထဲဆင်းရင် safety ၀တ်စုံပြည့်မ၀တ်ဖြစ်ဘူး … ဘယ်သူမှ အကာအကွယ်မရှိတဲ့နေရာကို ကိုယ်ကသေချာလုပ်သွားရင် သူများတွေများအမြင်ကတ်မလား၊ သဲလွန်းတယ်ထင်မလား စသဖြင့် စိတ်ရှုပ်မိတယ် …
ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေက ၀တ်စုံတွေကို ထုတ်ပေးလဲ အလုပ်သမားတွေက ရောင်းစားပစ်ပါတယ် … safety shoe , safety hat မပါပဲ site ထဲ မ၀င်ရဆိုပြန်တော့လဲ အလုပ်မဖြစ်ရုံသာရှိလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးရင်းနဲ့ အန္တရာယ်တွေကြားထဲမှာ ဘုရားစာရွတ်ရင်း အလုပ်လုပ်နေရပါတော့တယ် … ဘုရားတန်ခိုးလား ဘာလားတော့မသိ … ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့ ဖြစ်ခဲပါတယ် …
အော်… လူ့အသက်တစ်ချောင်းရဲ့ တန်ဖိုးကလဲ နော်…
ပညာမဲ့လို့ ဒီအလုပ် လုပ်ရတဲ့လူတွေ ကတော့
ချီမွမ်းခံရ မြှောက် ပင့်အပြောခံရ တာကိုဘဲ ကြေနပ် မိကြတာပါ
ငွေမရှိလို့ သေမထူး နေမထူး ဆိုရင်တော့ အသက်ထက် နေရာ ရရေးက ပိုအရေးကြီးတာ တွေ့ဖူးပါတယ်။
တချို့ငွေကြေးချမ်းသာ ပြီးပြည့်စုံ နေပေမဲ့ နေရာတစ်နေရာ ရဖို့အတွက်
အသက် ဂုဏ်သိက္ခာ တွေကို ရင်းပြီး လုပ်ကြတဲ့ ရူးသွပ်ကြတဲ့ သူတွေရှိတာ ကြုံဖူး ကြားဖူးမယ် ထင်ပါတယ်၊
ဒီလူတွေနဲ့စာရင် ကိုယ့်ဝမ်းစာအတွက် အသက်နဲ့ရင်းပြီးရိုးသားစွာ နေရာရချင်တဲ့ သူတွေက ပိုတန်တယ် ထင်ပါတယ်။
တချို့ဆို မိသားစုတောင် ရင်းပြီး နေရာတစ်နေရာ ရအောင် လုပ်နေတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။
–ို င် -ံ ကိုရင်းပြီး နေရာ ရအောင် လုပ်နေတဲ့ ——- ကြီးတွေ ကိုရော ဘယ်လိုပြောမှာလဲ။
နေရာက အရေးမကြီးဘူးလား? သူတို့အတွက် အသက်ထက် အရေးကြီးပါတယ်
မနေ့ကရော ဒီနေ့မနက်ပါ မိုးရေရွှဲရွှဲစိုတယ်။ ဆိုင်ကယ်ပါလမ်းချော်ပြီးလဲလိုက်သေးတယ်။ ဒီကြားထဲ မနေ့ညက ချစ်သူ စိတ်ကောက်၊ စိတ်ဆိုး၊ ဒေါသထွက်တာခံရသေးတယ်။ ကံမကောင်းပါလား။
eros ရေ ငါတို့လည်း မနေ့ကရော ဒီနေ့မနက်ရော မိုးသည်းလို့ ရုံးသွားချိန် ရေရွှဲတာပါပဲ… ။ ဘူဘူချင်း တစ်မလုပ်ပါနဲ့ …. :D
ပြောနေတာ အလုပ်သမားအကြောင်း … သူပြောချင်တာ သူ့အကြောင်း ။
ဒီကြားထဲ ကြော်ငြာကလည်း လာဝင်နေသေးတယ်… ။ နင်က မိုးရေထဲ ဘောလုံးကန်နေမှတော့ နင့်ကောင်မလေး စိတ်ကောက်တာ မလွန်ပါဘူး …သူ့ခများလည်း တွေးရှာမပေါ့ … ရည်းစားမိတာ မူကြိုကလေးများ ကြိုက်မိသလို ဖြစ်နေသလားလို့ ။
ပြောလေ ကဲလေ … မန်းလေ ပြဲလေပါပဲ ။
ဆိုင်ကယ် လမ်းချော်လဲတော့ သွားတချောင်း ပဲ့မသွားဘူးလား
တစုံဆို ပိုလှ မလားလို့ တွေးမိတာ။
etone က သတင်းထောက် တစ်ယောက်ရဲ့ Talent ရှိတယ်။ပူလစ်ဇာဆုတွေဟာ ဒီလိုပုံတွေကနေရလာတာပါဘဲ။သွားရင်းလာရင်း မျက်စိထဲမြင်တာကို သတင်းအဖြစ်တင်ပြဘို့ရာ ကြည့်တတ်ဘို့လည်းလိုပါတယ်။အရင်တစ်ခါ လိပ်ကျောက်တုံးကလည်း etoneလို့ထင်ပါတယ်၊ post ကို ဖတ်ရပြီးမှ ဂျာနယ်တွေထဲမှာ အဲဒီသတင်းပါလာတာ။ဖတ်မိပြီးချီးကျူးချင်တာ မရေးဖြစ်လိုက်လို့ပြန်ရှာပြီးမန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အန်တီ ပုဒုံမ္မာရယ် etone က တိုက်ဆိုင်သွားလို့ ရိုက်လိုက်မိတာ… ။ ပထမတစ်ခါ ငါးကြီးသယ်နေတုန်းကလည်း ဆူညံလွန်းလို့ အိပ်ယာနိုးသွားရာက လက်ဆော့မိတာ… ။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း တိုက်ဆိုင်မှူပဲ
မမအိတုန် ကလည်းလျှပ်တပြတ် ဂျာနယ်က သတင်းထောက်လားတောင်ထင်ရတယ်နော်
ကျွန်တော်တို.ဆီက အလုပ်ကြမ်းသမားတွေဘ၀က တော်တော်ကို ကြမ်းတမ်းတယ်ဗျ
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တော်ဝင်စင်တာ ဆောက်တုန်းက ၀င်လုပ်ဖူးလို.သိတာပါ။